Ntaneti MP3 ka OGG - Tọghata ọdịyo faịlụ site na MP3 ka OGG
Ntaneti MP3 ka OGG
Tọghata ọdịyo faịlụ site na MP3 ka OGG ntanetị. Ọ dịghị mkpa nyefe faịlụ!
* Dịka anyị na-eji teknụzụ nchọgharị kachasị ọhụrụ, anyị na-akwado nsụgharị desktọọpụ abụọ ikpeazụ nke Chrome maka ugbu a. More nchọgharị ga-akwado anya.
Ihe Ntụgharị MP3
Ndị na-agbanwegharị ọdịyo anyị n'ịntanetị bụ ihe pụrụ iche: ọ dịghị mkpa ka ha nyefee faịlụ ọdịyo gị na ihe nkesa dịpụrụ adịpụ iji gbanwee ha, ntụgharị ihe ntanetị na-eme site na ihe nchọgharị n'onwe ya! Lelee ngalaba "Enweghị nnyefe data" n'okpuru iji mụtakwuo.
Ndị ọzọ na-atụgharị ntanetị n'ịntanetị na-eziga faịlụ ọdịyo gị na ihe nkesa iji gbanwee ha wee budata faịlụ ndị ahụ laghachi na kọmputa gị. Nke a pụtara na iji atụnyere ndị ntụgharị ntanetị ndị ọzọ na ndị na-atụgharị ọdịyo anyị ngwa ngwa, akụ na ụba na-enyefe data, yana enweghị aha (nzuzo gị na-echekwa kpamkpam ebe ọ bụ na anaghị ebufe data gị na ịntanetị).
Nwere ike ịgbanwe faịlụ ọdịyo na-akparaghị ókè na-enweghị ịwụnye ngwanrọ ọ bụla, na-enweghị ịbanye, na-enweghị ịnyefe faịlụ gị.
Anyị na-atụ anya na ọ ga-atọ gị ụtọ!
Anyị na-emepe emepe ngwaọrụ dị n'ịntanetị na-egbu na mpaghara gị na ngwaọrụ gị. Ngwaọrụ anyị adịghị mkpa iziga faịlụ gị, data ọdịyo na vidiyo na ịntanetị iji hazie ha, ọrụ niile na-eme site na ihe nchọgharị n'onwe ya. Nke a na-eme ka anyị ngwaọrụ ngwa ngwa na mma.
Ebe ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ dị n'ịntanetị na-eziga faịlụ ma ọ bụ data ndị ọzọ na sava ndị dịpụrụ adịpụ, anyị anaghị eme. Na anyị, ị na-mma!
Anyị na-eme nke a site na iji teknụzụ weebụ kachasị ọhụrụ: HTML5 na WebAssembly, ụdị nke koodu nke ihe nchọgharị na-agba na-enye ohere ka ngwaọrụ anyị n'ịntanetị rụọ ọrụ na ọsọ ọsọ.
Ihe omuma di iche na odi
MP3 (ma ọ bụ nke a maara dị ka MPEG-1 Audio Layer III ma ọ bụ MPEG-2 Audio Layer III) na-eji mkpokọta data na-enweghị atụ, nke pụtara na ọ na-atụfu akụkụ nke data ọdịyo ọ na-etinye. Ngwakọta ụda MP3 tụfuru site na mkpakọ MP3 dabara adaba na ụda nke ọtụtụ mmadụ na-anaghị ege. Compdị mpịkọ a gụnyere enweghị ọrụ, mana nke ọtụtụ mmadụ anaghị achọ. Mkpokọta MP3 na-erute ogo 80% na 95% belata nha faịlụ.
WAV (Waveform Audio Faịlụ Format) bụ usoro bụ Windows na-eji ya na faịlụ ndị dị na usoro a na-enwekarị ụda olu na-adịghị agwụ agwụ. Ihe ndị ọzọ dị n'okpuru ahụ bụ sistemụ ngụpụta olupụta akara (LPCM), ejikwa ya maka CD ebe a na-enyocha ọdịyo ahụ na 44100 Hz yana ihe mmụba iri na isii n'otu ntanetị.
M4A (ma ọ bụ MP4, na-anọchite anya MPEG 4 Audio) na-eji ọkọlọtọ Audio Coding Advanced A cod (Usoro AAC) iji nye mgbakwụ ụda dị ụkọ, nke pụtara na ọ gụnyere ụfọdụ ogo ogo nke agachaghị abụkarị. Audiodị ọdịyo a ka mma karịa na MP3 na nha faịlụ nha. ITunes's iTunes ga-emepe faịlụ M4A mana ihe ndị ahụ bụ Apple Lossless Audio Codec (ALAC) maka mkpakọ data na-enweghị ụkọ, nke pụtara na enweghị data ọdịyo na ogo ga-efu.
FLAC (Codec Audio Lossless Free) bụ usoro enweghị olu na-enweghị atụ nke pụtara na mkpakọ ụda ya na-enweghị enweghị njiri dị mma. Enwere ike belata nha faịlụ ka ihe ruru 70% site na iji FLAC na enweghị njiri dị mma ọ bụla.
OGG bụ usoro akụkụ ọdịyo nke ọdịyo na-esitekarị n'ụdị codex Xiph.org n'efu: Vorbis ma ọ bụ Opus maka mkpakọ ọdịyo na FLAC maka mkpakọ ọdịyo na-enweghị isi.
AIFF (Audio Usoro Mgbanwe Ọkpụkpọ) bụ nke Apple mepụtara ma jiri ya mee ihe na kọmputa kọmputa Mac. Ihe omuma di egwu kariri otutu faili AIFF bu ihe ngbanwe nke igwe (PCM) nke putara na nha faịlụ nwere ike buru ibu ma e were ya na mkpirisi okwu di ka MP3 na M4A.
© 2021 itself tools. Ikike niile echekwabara.